11 ku dhimatay Nigeria weerar isqarxin - BBC News Somali
11 ku dhimatay Nigeria weerar isqarxin
19 Oktoobar 2015
Ugu yaraan 11 ruux, ayaa lagu dilay waqooyiga iyo bariga Nigeria kaddib markii labo haween ah ay ku qaadeen weerar isqarxin.
Qaraxyada, ayaa ka dhacay tuulo fog oo ku taal gobolka Adamawa dhammaadkii toddobaadka.
Waxaa jira warar iskhilaafsan oo sida ay wax uga dhaceen tuulada fog ee Darlate habeenkii sabtiga. Mas'uuliyiinta, ayaa sheegay in nin hubeysan uu soo weeraray. Markaa kaddibna labo haween ah ay isku qarxiyeen dad badan oo ka cararay tuulada.
Goobta, ayaa waxaa si joogta ah u weerara kooxda Boko Xaraam. Waxayna ku dhawdahay halka ay ku xooggan yihiin ee keynta Sambisa, halkaasi oo ay gabbaad ka dhigtaan kana qaadaan weerarada.
Inkastoo howlgal baxaad weyn leh ay militeriga Nigeria kaga sifeynayaan kooxda magaalooyinka iyo tuulooyinka, ayey hadana u muuqdaan Boko Xaraam in aysan waxbadan lumin awoodooda ay weeraro waxyeelo leh ku geysan karaan.
Koox xuquuqda aadanaha, ayaa sheegtay in tiro ka badan kun ruux ay dhinteen ilaa markii xafiiska uu qabtay May madaxweynaha cusub ee Nigeria. Mahammadu Buhari, ayaa ballanqaaday inuu burburinayo falaagada dhammaadka sanadkan, balse weerarada waa socdaan, waxayna Boko Xaraam u muuqdaan kuwa ka fog in la jabiyo.